Chinja maPDF ako kuti ave nharembozha, Webhu Yakagadzirira, Inogovana Chibvumirano | Martech Zone
Chinja maPDF ako kuti ave nharembozha, Webhu Yakagadzirira, Inogovana Chibvumirano
China, November 6, 2014 Douglas Karr
Vanenge vese munhu ane mashandisiro emakesi, machena mapepa uye yekutengesa chibatiso muPDF fomati. Nepo machira mazhinji aine vaverengi vePDF mazuva ano, iwo maverengi haana kugadzirirwa kuverenga pamadhizaini nekwanisi yekugovana navo munharaunda kana kuasanganisa zvakanangana nezvako zvemukati.
Ririnyore kabhuku inopa chishandiso chiri nyore uko iwe kwaunogona kurodha uye kumisikidza tumabhuku yakagadzirwa kubva maPDF ako kana yakagadzirirwa kubva pakutanga. Tubhuku twunogona kutumirwa, kupiniwa, kutumirwa tweeted, kugovaniswa, kutumirwa maemail, kuiswa uye kubudiswa nevatengi chero kupi. Iwe unogona zvakare kupa zvinongedzo kune ekumhara mapeji ekutungamira kutora.
Shandisa yedu yakabatana link uye iwe unogona kuwana 55% KUSVIRA kwegore rimwe kunyoreswa kweRinyoreBooklet HERO Chirongwa.
Heino pfupiso vhidhiyo ye Ririnyore kabhuku:
Tarisa uone iyo Garari iri Simplebooklet's saiti kuti uone mienzaniso mikuru yekuti vashambadzi vari kushandisa sei chikuva. Unogona kuyedza chikuva mahara. Ive neshuwa yekushandisa yedu yakabatana link uye iwe unogona kuwana 55% KUSVIRA kwegore rimwe kunyoreswa kweRinyoreBooklet HERO Chirongwa.
Tags: chinja pdfnhare pdfkutengesa mapepainogovaniswa pdfnyore nyore kabhukushandisa matambudzikovarungu
Iyo Inonyanya Kubudirira B2B Zvemukati Zvekushambadzira Maitiro
Vaka maCTA uye Govera seMabhenji Ads neBannersnack